I-China i-Oxygen ye-gesi yezoNyango ye-Oxygen yokuSebenza kweZibhedlele abavelisi be-Oxygen Medical Filling Machine kunye nabathengisi | OKANYE
Utyalo lweeoksijini zeGesi yezoNyango kusetyenziswa isibhedlele sisebenzisa umatshini wokugcwalisa ioksijini
Icandelo lokwahlula i-1Air ngobushushu obuqhelekileyo bemolekyuli yokuhlanjululwa, i-booster-turbo expander, ikholamu yokulungisa uxinzelelo oluphantsi, kunye nenkqubo yokutsala iargon ngokwemfuno zabathengi.
2. Ngokuya kwimfuno yemveliso, uxinzelelo lwangaphandle, uxinzelelo lwangaphakathi (ukonyusa umoya, ukunyusa initrogen), uxinzelelo lokuzikhusela kunye nezinye iinkqubo zinokunikezelwa.
Uyilo lwesakhiwo sokuvala i-ASU, ukufakwa ngokukhawuleza kwindawo leyo.
Inkqubo yoxinzelelo olusezantsi lwe-ASU olwehlisa uxinzelelo lwe-compressor yokukhupha umoya kunye neendleko zokusebenza.
5.Inkqubo yokukhupha iargon kunye nenqanaba eliphezulu lokutsalwa kweargon.
Egqithileyo Isityalo seNitrogen yeLiquid Isityalo seNitrogen seGesi, Isityalo seNitrogen esicocekileyo esinamatanki
Okulandelayo: Iprojekthi yeOxygen kunye neNitrogen Factory yeProjekthi yoNyango kunye nokuSebenza